Honor Manambara MagicWatch 2 Fanontana fanontana voafetra | Androidsis
Ny fanontana voafetra dia tonga taorian'ny fivarotana tsara ny vokatra ankapobeny. Ny marika kely an'i Huawei dia nanambara smartwatch vaovao miaraka amina endrika vaovao manaitaitra azy kinova voafetra amin'ny Honor MagicWatch 2 ary hahatratra an'i Azia izany amin'ny voalohany, avy eo dia hahatratra ny kaontinanta hafa ny mahazatra.
Ity maodely vaovao ity dia misy tarika miloko, bezela ary lohahevitra maro karazana, namboarin'ny "kintana misandratra maromaro eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny sary", hoy i Honor tao anatin'ilay fanambarana. Efa am-bolana maro no niasana io talohan'ny nandefasana azy io, ny sketera dia manana sary maro ary 85 ny famolavolana farany voafantina.
Hatramin'io fotoana io dia nisy habetsahana voafetra voafaritra sosona ao amin'ny Huawei Health, fa manomboka amin'ny volana febily dia hisy 85 fanampiny. Amin'ireo sary miisa 1.400, dia somary sarotra ny fifantenana satria maro no tavela ary rehefa avy nandalo ny fifaninanana Honor Global Watch Face Design nanomboka ny voalohan'ny volana Janoary.
George Zhao, filohan'ny voninahitra, dia nanambara fa ny orinasa dia miezaka ny ho marika teknolojia mitarika. Tamin'ny fanombohana ny MagicWatch 2, azo atao ny mahazo famantaranandro manaitaitra, miaraka amin'ny fizakantena lehibe ary mety ho an'ny atleta amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fanatanjahan-tena isan'andro.
Endri-javatra mitovy amin'izany
El Honor MagicWatch 2 Izy io dia manana efijery mikasika AMOLED 1,39-inch, dial manokana ary ny bateria dia manome andro 14. Azo vidiana amin'ny sfera amin'ny habe roa izy: 46 sy 42 mm, mitovy ny fiasan'izy ireo ary ny vidiny farany ihany no hiova.
El MagicWatch 2 Limited Edition dia ho tonga tonony Samy hafa, ny 2mm MagicWatch 46 amin'ny mainty karbonika dia mitentina 189,99 euro, raha 44 euro kosa ny 179,99mm. Ny fahatongavany any Eropa dia tsy fantatra amin'izao fotoana izao ary hahalala antsipirihany vaovao isika amin'ny Mobile World Congress 2020 any Barcelona izay hanatrehan'i Honor.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Honor dia manambara ny fijerena MagicWatch 2 Limited Edition
Samsung Galaxy A11, M31 ary M11 dia mahazo fanamarinana Wi-Fi Alliance